Ngo-1989, ezikrinini Soviet out Thriller Aleksandra Muratova "Quartet Criminal". Abalingisi uVladimir Steklov, AN Karachentsov futhi Boris Shcherbakov ukudlalwa ifilimu Starring futhi ngempela ekholisayo, njengoba ngo-1990, ifilimu won umklomelo Audience French Film Festival e Cognac. Yini iyalandisa ifilimu "Quartet Criminal"? Futhi kulapho uyabathanda lab 'afune izinto ngenkani kwabanye izilaleli European?
Le filimu Aleksandra Muratova senzeka ngo-1989, ngosuku olwandulela ubugebengu obudlangile 90. amaqembu ezigebengu ukwenza kuphangwa ngokuya kwakwakhiwa futhi uzame ukuba zilawule imigomo yabo, hhayi kuphela amaphoyisa kodwa futhi iziphathimandla.
Umphenyi Simon Portnov defies izinsongo ezigebengwini futhi uyenqaba ukubuyela ngempango zabo zithathwe. Beziphindiselela, gang Othumba indodana protagonist. Esimweni esinjalo Portnov ungakwazi kuphela ancike abaseduze abangane, ngakho icela usizo kubangane kusukela lezintandane - amaphoyisa Marat noPetru, kanye intatheli Nikolaya Larina. Ndawonye bezama ngokushesha ngangokunokwenzeka ukuze uthole umfana umthunjwa, ukuqonda ngokucacile ukuthi ngeke badedelwa bephila. Yileyo main lwendaba Thriller "Quartet Criminal".
Abalingisi kanye izindima, isenzo iskripthi - kule movie ethakazelisa nakakhulu, ngakho uye athathwe liyindawo efanelekayo phakathi kwezinye okuvusa usinga ngesikhathi IFF e Cognac.
Ngaphezu Umdwebo "Quartet Criminal", umqondisi-Alexander Muratov wasuka impi ifilimu "Moonzund" nge-Oleg Menshikov futhi idrama ethi "i-Contract noma Ekhulwini" nge uVladimir Gostyukhin.
Webhayisikobho ngoba "Umtfumbu quartet" wabhala Boris Giller. Operator isethi wasebenza Konstantin Ryzhov, owadubula le "Headless wehhashi" kanye tragicomedy "zhenya, zhenya futhi" Katyusha "."
"Quartet Criminal": nabalingisi (1989). UVladimir Steklov njengoba uSemyon Portnoy
UVladimir Steklov yaqala ukuzenza umuntu kuphela ngemva kweminyaka engu-30. Ngaphambi kwalokho, babenedumela umlingisi ithatha waseshashalazini: usebenza Kineshma, Petropavlovsk-Kamchatsky, ngo-1981 - eMoscow.
Ngezinye uVladimir Steklov ngendlela sasivumela elukhuni zokuxhumana kanye ukubukeka eyindoda, ngakho ngo-movie ngokuvamile, udlala noma scoundrels eziyihlazo, noma iqhawe olunezimiso kakhulu nokuba lukhuni komthetho. Lo mlingisi kungabonakala ezifana amafilimu odumile njengoba "Naval Labaqalayo, Phambili!", "Amasela eMthethweni", "The Prisoner of Uma Castle", "Petersburg izimfihlo" futhi "D.D.D. Idokodo elikhishwe umphenyi Dubrovsky ".
In the movie "Umtfumbu Quartet" abadlali Nikolay Karachentsov futhi uVladimir Steklov babambisana uzimele okokuqala. Ngemva kwesikhashana ababetholakale iqoqo ochungechungeni "D.D.D. Idokodo elikhishwe umphenyi Dubrovsky ".
Steklov e Thriller "Quartet Criminal" got indima main protagonist - mseshi, ongazange ahambe ukubhekana nezigebengu, ngisho nalapho bathunjwa ingane yakhe. Ukuba intando eqoqwe isibhakela, Semon Portnoy exhunywe kwi-uphenyo abangane bakhe, waphuma impi yokulwa nobugebengu winner.
"Quartet Criminal": nabalingisi indima ifilimu Soviet. UNikolai Karachentsov iqhawe lakhe Marat
UNikolai Karachentsov - umlingisi amaSoviet nasemakamu Russian ezaziwayo, ngubani lavuselelwa omkhulu ngasekupheleni 70 sika - zakuqala 80-yalolucwaningo. Ngo-1977, umlingisi uvele movie "Inja ku Manger," Yana Frida, ukudlala esihambisana Mihailom Boyarskim futhi Margaritoy Terehovoy. Ngemva kwesikhashana Karachentsov got indima abaholayo ifilimu izingane athandwa sika "The Adventures of Electronics". Lokhu kwalandelwa umsebenzi wokwakha "Sherlock Holmes uDkt Watson," "Imbongolo isikhumba", "I Battalion ucelwa nomlilo" futhi "Umuntu kusukela Boulevard des Capucines".
Ngo "Umtfumbu quartet" Karachentsov uvele ezicashe ukaputeni wamaphoyisa Marat Mukhanova ukuthi okwamanje kunzima ifikile ukusiza umngane wakhe ngasiza ukutakula indodana yakhe.
Boris Shcherbakov njengoba Petra Saraeva
In the movie "Umtfumbu Quartet" abadlali Shcherbakov, Karachentsov, ingilazi kanye Eremin uvele ngaphambi izilaleli ezifana 4 "Musketeers" ababa stand up for izimiso zabo, hhayi ivumele ukucindezela kwezwe ngaphandle. Boris Shcherbakov leli qembu waba omunye izindawo ezisemqoka, ukudlala ukaputeni wamaphoyisa Petra Saraeva, exhunywe kwi-uphenyo Undercover uSemyon Portnoy.
Boris Shcherbakov, owaphothula eMoscow Art Theatre, e-'80s ngokuvamile uvele ubugebengu amafilimu kanye okuvusa usinga. Udlale-KGB hlola ezinkulu kuleli ifilimu "Cha yisimiso ukulinganiselwa," umshayeli wemoto-Trucker i-movie senzo, "Redemption", umyeni wakhe ubuhle antule ukuzithiba, ehlanganisa lezigilamkhuba, kule drama "amasela emthethweni".
Lezo zinsuku, umlingisi uyaqhubeka ukwenza hhayi kuphela isici ifilimu, kodwa futhi uchungechunge sethelevishini.
Nye bhekana ezidumile futhi kwakhanya uzimele Thriller "Quartet Criminal". Umlingisi uVladimir Eremin, elidume ngokuba nabantu amafilimu "Moonzund", "Ukuwohloka Afghan" futhi "Princess and the Bean", kudlalwa intatheli Nikolaya Larina - sidekick lwesithathu uSemyon Portnoy.
Umlingisikazi Nele Savicenko-Klimenov ( "ebiwe Injabulo") iwine indima unina ingane umthunjwa kanye ex-umkakhe Portnoy umphenyi. Nangu eza indima encane Anton Portnoy ithole Muradhanovu Ivan, kamuva iziqu GITIS futhi waba umlingisi okhokhelwayo.
Henrietta Yanovska. Biography, izithombe umndeni
ECrimea: izithelo Juni, ngoJulayi. igama ohlwini nencazelo izakhiwo
Indlela ukubhuka ithikithi plane? Ukubhuka amathikithi inthanethi ngaphandle kokukhokha
Izimpawu ze-ngemva kokulunywa umkhaza - sokukhathazeka!